9-Me-BC Khibrad: 7 Xaqiiqo oo Ku Saabsan Waxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
9-Me-BC-aragnimo: 7 xaqiiqo oo ku saabsan 9-Me-BC waxaad u baahan tahay inaad ogaato
Waa maxay 9-ME-BC?
9-Me-BC (9-Methyl-β-karboline) oo sidoo kale loo yaqaan 9-MBC waa sheeko nootropic cusub oo ka socota kooxda from-karbolineline. Β-Carbolines-ka waxay ka yimaadeen qoyska karboline-ka kala duwan. Tan macnaheedu waa in lagu soo saaro labadaba shucuur jirka bini'aadamka iyo sidoo kale si heer sare ah miraha qaarkood, hilib la kariyey, qiiqa tubaakada iyo kafee.
The β-Carbolines (BCs) waxaa loo aqoonsaday inay yihiin neurotoxic, si kastaba ha noqotee, waxaa dhowaan la ogaaday in 9-Me-Bc ay waxtar leedahay. 9-Me-BC waa dopaminergic neuroprotector oo waliba wanaajiya shaqada garashada.
Budada 9-Me-BC iyo sidoo kale kaabsal 9-Me-BC ah dhamaystirid foomku waa nootropic aad u fiican. Maaddaama ay ka duwan tahay nootropics-ka kale ee faa'iidooyinkoodu yaraadaan dhowr saacadood ka dib, 9-Me-BC waxay bixisaa saameyn muddo dheer socotaa iyo mid daba dheeraata
Phcoker waa soo saare xirfadle ah oo soo saara budada 9-me-bc
Si dhakhso leh u dir baaritaan: Nala soo xiriir
Budada 9-ME-BC- Sidee buu u shaqeeyaa?
9-Me-BC waa nootropic aad ufiican oo wareega ah oo soo bandhigaya qaab ficil oo dhowr ah. Dhowr farsamooyin 9-Me-BC ah oo ficil ah ayaa awood u siinaya inay si aad ah waxtar ugu yeelato ficilkeeda.
Hoos waxaa ku yaal 9-Me-BC farsamooyinka waxqabadka;
Waxay sare u qaadeysaa heerka dopamine ee maskaxda iyadoo ka hortageysa burburka dopamine, si ka duwan kiciyeyaasha kale sida kafeynka oo yareyneysa dopamine sababtoo ah sii deynta xad dhaafka ah iyo isticmaalka.
9-Me-BC wuxuu kiciyaa dhaqdhaqaaqa dopamine, wuu kala duwan yahay sidoo kale wuxuu ilaaliyaa neerfaha, dendrites iyo synapses-ka maskaxda. Tani waa sababta ay u awood u leedahay inay kor u qaaddo barashada, xusuusta iyo shaqada garashada
Waxay saameyn ku yeelataa tyrosine hydroxylase (TH) iyo cunsurradeeda qoritaanka iyadoo la falgalaysa kinases tyrosine. Kiniiniyada 'tyrosine kinases' waxay door ka ciyaaraan u beddelashada L-tyrosine L-Dopa oo mas'uul ka ah soo saarista dopamine.
9-Me-BC waxay xakameysaa monoamine oxidase A iyo B (MAOA iyo MAOB) sidaas awgeed waxay ka hortageysaa soo saarista xeryahooda neerfaha sida DOPAC oo ka yimaada dheef-shiid kiimikaadka dopamine. Walxahaani waxay sababaan geerida dareemayaasha dopaminergic.
9-Me-BC waxay xoojineysaa silsiladda neefsiga ee mitochondrial. Waxay tan ku fulisaa iyada oo kordhinaysa ama ilaalinaysa NADH dehydrogenase, oo loo adeegsado habka wareejinta elektaroonigga ee dhalinta tamarta.
9-Me-BC waxay sidoo kale kordhin kartaa cunsurrada neerfaha neerfaha sida cunsuriyadda koritaanka neerfaha (NGF), SHH (Sonic Hedgehog Signaling Molecule), Cilladda maskaxda ka soo baxda ee maskaxda (BDNF) ee kobcisa shaqada garashada, diiradda iyo sidoo kale dhiirigelinta.
Waxay kicisaa dhaqdhaqaaqa neerfaha halka sidoo kale ay kor u qaadeyso koritaanka neerfaha cusub. Tani waxay xoojineysaa xusuusta iyo barashada iyo shaqada garashada guud.
Waxyaabaha anti-bararka. 9-me-BC wuxuu ku dhacaa inuu la dagaallamo caabuqa daba dheeraada ee maskaxda ku dhaca iyadoo la yareynayo cytokines bararka, oo loo yaqaan inay sababaan isku soo ururinta microglial taas oo iyana carqaladeysa shaqada garashada.
Faa'iidooyinka 9-ME-BC - Sidee budada 9-ME-BC (Nootropic) kaa caawin karaa?
9-Me-BC dhamaystirid leedahay faa'iidooyin caafimaad oo kaladuwan. Faa'iidooyinka kala duwan ee 9-Me-BC waa natiijada qaabab dhowr ah oo ficillo ah oo ay muujiso.
Hoos waxaa ku qoran faa'iidooyinka 9-Me-BC;
i. Waxay horumarin kartaa barashada, xusuusta iyo garashada
9-Me-BC wuxuu kiciyaa waxqabadka neerfaha iyo sidoo kale wuxuu kobciyaa koritaanka unugyada cusub ee neerfayaasha. Tani waa mid aad muhiim ugu ah kor u qaadista barashada, xusuusta iyo shaqada garashada guud.
9-Me-BC sidoo kale kor u qaadista ATP wax soo saarka tamarta iyadoo la xoojinayo silsiladda neefsashada ee mitokondria. Sidaa awgeed tamar kordhay oo dhiirrigelisa dhiirigelinta iyo feejignaanta
Daraasad ku saabsan jiirka, 9-Me-BC dheeri ah oo la siiyay 10 maalmood ayaa lagu ogaadey inay wanaajineyso barashada. Daraasadu waxay soo warisay inay taasi sabab u tahay heerarka dopamine oo kordhay iyo sidoo kale kobcinta koritaanka synapses iyo dendrites.
ii. Waxay ka caawisaa la dagaallanka caabuqa
Caabuq waa hab dabiici ah oo jirku kula dagaallamo infekshin ama dhaawacyo. Si kastaba ha noqotee, bararka joogtada ah wuxuu waxyeello u leeyahay jirka waxaana lala xiriiriyay cuduro badan sida sonkorowga iyo kansarka.
Markaa waxay noqoneysaa lagama maarmaan in la xakameeyo caabuqan ka hor inta uusan noqonin mid ku habboon jirkaaga. Nasiib wanaagse, budada 9-Me-BC waxay kaa caawin kartaa kahortagga caabuq daba dheeraada. Waxay la dagaallanto bararka iyadoo la yareeyo cytokines bararka.
iii. Waxay xoojin kartaa libido
9-Me-BC xarunta nootropic waa mid aad u dopaminergic ah. Xermooyinka loo yaqaan 'Dopaminergic xeryahooda' waxaa lagu yaqaan inay kordhiyaan heerarka dopamine ee maskaxda. Tanina waxay kordhineysaa firfircoonaanta 'dopamine' ee sida dhow ula xidhiidha libido badan.
iv. Waxay sare u qaadi kartaa waxqabadka cayaaraha
Awoodda 9-Me-BC si loo kordhiyo wax soo saarka tamarta iyo sidoo kale niyadda iyo dhiirrigelinta ayaa ka dhigeysa musharrax suurtagal ka ah hagaajinta waxqabadka cayaaraha.
Khibrad 9-Me-BC ah: Sidee loo isticmaalaa 9-MBC?
Qiyaasta 9-Me-BC ee lagugula taliyay waxay qaadataa hal 9-Me-BC kaabsal maalin kasta. Hal kaabsal ah 9-Me-BC wuxuu u dhigmaa 15 mg oo ah budada 9-Me-BC.
Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadatid kaabsoolka 9-Me-BC subaxdii maadaama la ogyahay inay kordhiso feejignaanta, niyadda, iyo dhiirigelinta, oo aad runtii ubaahan doonto inta lagu jiro howlaha maalinta.
Amni iyo sharci ma tahay in la isticmaalo 9-MBC? Khataraha 9-me-bc?
9-MBC guud ahaan waxaa loo arkaa amaan kaalmada cuntada. Laga soo bilaabo daraasad xayawaan, 9-Me-BC nootropic oo la maamulay 10 maalmood ayaa lagu ogaadey inay gebi ahaanba amaan tahay.
Si kastaba ha noqotee, wax xog ah lagama heli karo isticmaalka 9-Me-BC dheeri ah muddo dheer iyo sidoo kale tijaabooyin caafimaad oo aad u yar marka loo eego nootropic 9-Me-BC.
Sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad taxaddar sameyso markaad qaadaneyso nootropic-ka adoo nasanaya inta udhaxeysa si looga fogaado wixii halista ah ee 9-Me-BC-da ka dhalan kara
Kordhinta 9-Me-BC waxay sharci ka tahay waddan kasta oo adduunka ah. Waxaa loo qoondeeyey loona iibiyaa sidii nafaqada dheeraadka ah sidaa awgeed loo xakameeyo si la mid ah cuntooyinka Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka.
Waa sharci in qof kastaa iibsado oo isticmaalo kaabis 9-Me-BC ah. In kasta oo, 9-Me-BC loo arko sharci ahaan badbaado, waxaa lagula talinayaa mid inuu la tashado dhaqtarkooda caafimaad ka hor inta uusan ku biirin.
In kasta oo kaabista 9-Me-BC guud ahaan loo arko inay ammaan tahay, haddana waxaa jira laba waxyeellooyin oo waaweyn oo suurtagal ah 9-Me-Bc oo aad la kulmi karto;
Xasaasiyadda sawir-qaadashada-dheer ee qorraxda waa in laga fogaadaa marka la isticmaalayo Kordhinta 9-Me-BC maxaa yeelay tani waxay u horseedi kartaa waxyeelo DNA ah dariiqa shucaaca UV. Haddii ay tahay inaad qorraxda hoosteeda ku hoos jirto shaashad qorrax ah ayaa lagama maarmaan noqon doonta si looga fogaado dhibaatooyinka la sheegay ee 9-Me-BC
Dopamine neurotoxicity sidoo kale way dhici kartaa; si kastaba ha noqotee, tani waxay dhacdaa markii aad dhaafto qiyaasta lagu taliyay ee ah 9-Me-BC. Sidaa darteed, waa looga hortagi karaa adoo qaata qiyaasta 9-Me-BC ee lagu taliyay.
Dhibaatooyinka kale ee 9-Me-BC ayaa laga soo sheegay dadka isticmaala ee la wadaagay khibradooda 9-Me-BC waxaa ka mid ah lallabbo iyo madax xanuun. Si kastaba ha noqotee, saameyntan xun waa mid aad u yar oo kaliya waxay dhacdaa marka qofku qaato xaddi badan oo ah 9-Me-BC supplement.
Ayaa ka faa'iideysan kara 9-me-bc (nootropic)?
Asal ahaan qof kastaa wuxuu ka faa'iideysan karaa faa'iidooyinka 9-Me-BC nootropic. Si kastaba ha noqotee, kooxaha qaarkood waxay ka faa'iideysan karaan wax ka badan 9-Me-BC marka loo eego kuwa kale. Shaqaalaha, ardayda iyo ciyaartooydu waxay si wax ku ool ah uga goosan karaan Waxtarka 9-Me-BC.
Maaddaama, 9-Me-BC ay tahay mid aad ufiican oo aad ufiican oo dopaminergic ah, waa kaalmo aad ufiican ardayda doonaya inay kordhiyaan feejignaanta, dhiirigelinta inay waxbartaan iyagoo wali wanaajinaya barashadooda iyo xusuusta inay waxbadan xasuustaan.
Shaqadu waxay culeys saari kartaa oo biyo shuban kartaa, laakiin nasiib wanaag 9-Me-BC waxay bixisaa dhiirigelin iyo tamar kor u qaadaysa waxtarkaaga shaqada. Waxay kicineysaa neerfaha oo kugu haya inaad diiradda saartid jidka oo dhan.
Isticmaalayaasha dib-u-eegista 9-Me-BC waa kuwo aad u wanaagsan oo aan la soo sheegin ama aan xaddidnayn waxyeellooyin soo raaca Sidaa wanaagsan dhamaystirid oo dhan.
Budada 9-ME-BC ee iibka ah - Halkee laga iibsadaa 9-ME-BC?
9-Me-BC iib ahaan si fudud ayaa looga heli karaa khadka tooska ah. Si kastaba ha noqotee, nadiifsanaanta heerka sare waa in lagu hubiyaa inaad hesho natiijooyinka laga filayo. Ka fikir dib-u-eegista 9-Me-BC ee isticmaalayaasha si aad u hesho aragti ku saabsan kaabsoolka 9-Me-BC ee ugu fiican ama kaabista budada.
Sida kaabis kale, way fiicantahay in la tixgeliyo halista 9-Me-BC ee dhici karta oo la qaado taxaddarka lagama maarmaanka ah.
Isticmaalayaal badan oo 9-Me-BC ah ayaa ka iibsada kuwa la ansixiyay alaab-qeybiyeyaasha nootropics yaa bixiya 9-Me-BC iib ahaan tayo aad u saraysa.
Markaad ka fiirsanaysid isticmaalka 9-Me-BC ka iibso shirkadaha bixiya 9-Me-BC iib ahaan tiro badan si aad ugu raaxaysato sicir-dhimista.
Gille G., Gruss M., Schmitt A., Braun K., Enzensperger C., Fleck C. iyo Appenroth D. (2011) 9-Methyl-b-karboline waxay hagaajineysaa barashada iyo xusuusta jiirka. Neurodegen. Dis. 8, 195.
Gruss, M., Appenroth, D., Flubacher, A., Enzensperger, C., Bock, J., Fleck, C.,… Braun, K. (2012). 9-Methyl-β-karboone-ku-kicinta garashada garashada waxay la xiriirtaa heerarka sare ee hippocampal dopamine iyo kordhinta dendritic iyo synaptic. Joornaalka cilmiga neerfaha, 121 (6), 924-931.doi: 10.1111 / j.1471-4159.2012.07713. x.
Hamann, J., Wernicke, C., Lehmann, J., Reichmann, H., Rommelspacher, H., & Gille, G. (2008). 9-Methyl-β-carboline up-wuxuu xakameynayaa muuqaalka muuqaalka dopaminergic neurones ee dhaqamada asaasiga ah. Neurochemistry International, 52 (4-5), 688-700.doi: 10.1016 / j.neuint.2007.08.018.
Polanski W., Enzensperger C., Reichmann H. iyo Gille G. (2010) Waxyaabaha aan caadiga ahayn ee 9-methyl-beta-carboline: kicinta, ilaalinta iyo dib u soo nooleynta dareemayaasha dopaminergic oo ay weheliso saameyn anti-bararka. J. Neurochem. 113, 1659-1675.
Wernicke, C., Hellmann, J., Ziêba, B., Kuter, K., Ossowska, K., Frenzel, M., m Rommelspacher, H. (2010). 9-Methyl-b-karboline wuxuu saameyn ku yeelanayaa soo celinta qaab xayawaan oo cudurka Parkinson ah. Warbixinnada Farmashiyaha, 19.
RAW 9-METHYL-9H-BETA-CARBOLINE AWOODAHA (2521-07-5)
1.Waa maxay 9-ME-BC?
Budada 2.9-ME-BC- Sidee buu u shaqeeyaa?
Faa'iidooyinka 3.9-ME-BC - Sidee budada 9-ME-BC (Nootropic) kuu caawin kartaa?
4. Khibrad 9-Me-BC ah: Sidee loo isticmaalaa 9-MBC?
5.Ma ammaan baa oo sharci ma aha in la isticmaalo 9-MBC? Khataraha 9-me-bc?
6.Yaa ka faa'iidi kara 9-me-bc (nootropic)?
Budada 7.9-ME-BC ee iibka ah - Halkee laga iibsadaa 9-ME-BC?